August 2018 - Daily Lokmandu
August 30, 2018 Comments Off on कमाउने म आफैै थला परेपछि के गरौं ? छोरी मरे मरोस् !
बुटवल, १४ भदौ । भाग्य पनि कस्तो ? जहाँ जहाँ घाउ उहि उहि चोट । विपन्न परिवारको घरमा एक जना सामन्य बिरामी हुँदा पनि धौ धौ पर्छ, भने एकै परिवारका तीन तीन जना सदस्य थला [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 30, 2018 Comments Off on निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धानको लागि अझै ७ दिन रोशनी बम र बबिता बमलाई हिरासतमा राखिने
निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धानको लागि अझै ७ दिन रोशनी बम र बबिता बमलाई हिरासतमा राखिने भीमदत्तनगर – निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएका रोशनी बम र बबिता बमलाई आज एक साताको म्याद थप गरिएको [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 30, 2018 Comments Off on पाल्पामा ढुङ्गामुनि लिङ्गेश्वर महादेवको आकृति (तस्बिर सहित)
पाल्पामा ढुङ्गामुनि लिङ्गेश्वर महादेवको आकृति (तस्बिर सहित) पाल्पाको तानसेन नगरपालिका १० तेल्घामा लिङ्गेश्वर महादेवको आकृति भेटिएको छ । करिव ७० मिटरको एउटै ढुङ्गामा विभिन्न मुर्ति बनाउने क्रममा यस्तो आकृति देखिएको भालेवासलाई धार्मीक तथा पर्यटकीयस्थल बनाउदै [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 30, 2018 Comments Off on #OMG …. एउटै अस्पतालमा काम गर्ने १६ जना नर्स एकैपटक गर्भवती !
एउटै अस्पतालमा काम गर्ने १६ जना नर्स एकैपटक गर्भवती ! एजेन्सी । अमेरिकाको ऐरिजोनास्थित एक अस्पतालमा काम गर्ने १६ जना नर्स एकैपटक गर्भवती भएका छन् । ब्यानर डेजर्ट मेडिकल सेन्टरको इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा काम गर्ने [ पुरा पढ्नुहोस ]
August 30, 2018 Comments Off on घामबाट आएपछी दहिमा २ ओटा चिज मिसायेर लगाउनुश सन्ट्यान चाया र डंडीफोर ५ मिनेटमा गायब हुन्छ पुरा हेर्नुस==>>
भिडियो अन्त्यमा छ अवश्य हेर्नुस एउटै अस्पतालमा काम गर्ने १६ जना नर्स एकैपटक गर्भवती ! एजेन्सी । अमेरिकाको ऐरिजोनास्थित एक अस्पतालमा काम गर्ने १६ जना नर्स एकैपटक गर्भवती भएका छन् । ब्यानर डेजर्ट मेडिकल सेन्टरको [ पुरा पढ्नुहोस ]
यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती ! जानी राखौ
August 30, 2018 Comments Off on यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती ! जानी राखौ
एजेन्सी : वास्तुशास्त्र अनुसार परिवारका सदस्य यदि बिरामी र तनावमा भइरहन्छन् भने यसको कारण घरको मुख्यद्वार पनि हुनसक्छ । मुख्यद्वारसँग जोडिएका वास्तु दोषका कारण घरका सदस्य शारिरिक, मानसिक र आर्थिक रुपमा विचलित हुन्छन् । वास्तुशास्त्रका [ पुरा पढ्नुहोस ]
प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण नरेन्द्र मोदीको भन्दा लोकप्रिय ! के भने प्रधानमन्त्री ओलीले ? हेरेर शेयर गरौ
August 30, 2018 Comments Off on प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण नरेन्द्र मोदीको भन्दा लोकप्रिय ! के भने प्रधानमन्त्री ओलीले ? हेरेर शेयर गरौ
काठमाडौँ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्गठनलाई दक्षिणपूर्व र दक्षिण एशियालाई जोड्ने सेतु बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको आज [ पुरा पढ्नुहोस ]
बिहे गरेको चार महिनामै दम्पतिको जेलमा बास :: पुरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुपुरा हेर्नुसहोस ।
August 30, 2018 Comments Off on बिहे गरेको चार महिनामै दम्पतिको जेलमा बास :: पुरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुपुरा हेर्नुसहोस ।
बिहे गरेको चार महिनामै दम्पतिको जेलमा बास :: पुरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुपुरा हेर्नुसहोस । राजविराज : बहुविवाह आरोपमा पक्राउ परेका एक जोडी धरौटी बुझाउन नसक्दा बुधबार जेल चलान भएका छन् । बहुविवाहको आरोपमा [ पुरा पढ्नुहोस ]
नेपालमै यस्तो अद्भूत ठाँउ जहाँ छ पुरै शिव लिङ्गहरुको पहाड : साउनमा सेयर गरे लाभ
August 30, 2018 Comments Off on नेपालमै यस्तो अद्भूत ठाँउ जहाँ छ पुरै शिव लिङ्गहरुको पहाड : साउनमा सेयर गरे लाभ
नेपालमै यस्तो अद्भूत ठाँउ जहाँ छ पुरै शिव लिङ्गहरुको पहाड : साउनमा सेयर गरे लाभ कञ्चनपुर । नेपालमा विश्वले अद्भूत मान्ने धरोहरु, प्राकृतीक केन्द्र र धार्मिक धरोहर रहेका छन् । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालीका ४ चुरेको [ पुरा पढ्नुहोस ]
मलाइ मर्न बाध्य पारे “छोरा आफ्नो बाटो आफै समाल्नु । १० कठा जमिन छ, आफ्नो भाग लिनु । तिम्रो पढाई यति नै हो” पुष्पाले अन्तिममा भनेकी छन् । सुन्नुहोस अडियो रेकर्डिङ
August 30, 2018 Comments Off on मलाइ मर्न बाध्य पारे “छोरा आफ्नो बाटो आफै समाल्नु । १० कठा जमिन छ, आफ्नो भाग लिनु । तिम्रो पढाई यति नै हो” पुष्पाले अन्तिममा भनेकी छन् । सुन्नुहोस अडियो रेकर्डिङ
महिला हिंसाविरुद्ध नेपालमा विरोध पदर्शन भइरहेको बेला भारतमा एक नेपाली महिलाले आत्महत्या गरेकी छन् । उनले आफ्ना तीन छोराछोरीको लागि अन्तिम अर्ति रेकर्ड गरेर खल्तिमा हालेर आत्महत्या गरेकी हुन् । अछामको मंगलसेन–७ की ४० वर्षीय [ पुरा पढ्नुहोस ]